Usenkantolo umama 'owabulala' izingane ngoshevu | News24
Pretoria - Icala lokubulala elibhekene noKgomotso Makena osolwa ngokubulala izingane zakhe ezimbili ngokuzidlisa ukudla okunomuthi wokubulala amagundane kulindeleke ukuba lilalelwe namuhle (ngoLwesibili) eNkantolo yeMantshi yaseMoretele eduzane nasePitoli.
Isigameko senzeka eStinkwater villager ngoMeyi ngonyaka odlule, ngemuva kokuba izingane ezimbili, eyentombazane, 7, neyomfana, 2, zanikwa ukudla kwesidlo sasekuseni okuthakwe ngoshevu ngezizathu ezingaziwa.
OLUNYE UDABA:Iphoyisa laKwaThema laxubela izingane ushevu ne-yoghurt
Ubaba wezingane wazithola ziyizidumbu embhedeni zimbozwe ngengubo yokulala.
Umsolwa kubikwa ukuthi wazisholo yena ukuthi uzibulele izingane naye wawudla ushevu kodwa wasinda.
Inkantolo kulindeleke ukuba ngoLwesibili ilindele impendulo mayelana nesinqumo se-Directorate of Prosecution sokushushisa.